रोचक प्रसंग | Rochak Khabar
रोचक प्रसंग 
विवाहभन्दा पहिला कुनै पनि केटा मान्छे केटी हेर्न जाँदा उसको रुपरंगको बारेमा जानकारी लिने गर्दछन्। यी कुरा केटा मान्छेले सजिलै थाहा पाउछन् यसमा धेरै पटक केटा मान्छेहरुले यसलाई रहस्मय तरिकाले थाहा नै पाउँदैन्। तर शास्त्रका अनुसार धेरे यस्ता विधि छन् कि कुन...
27 Dec, 03:56 AM
सपना नदेख्ने को होला र ? हामीमध्ये धेरैको सपना हाम्रो आसपासको वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो काम, छर छिमेकको वातावरण र हाम्रो दैनिकी नै सपनाका विषयवस्तु हुन्छन् ।तर क्यालिफोर्निका बर्केले युनिभर्सिटीका द ग्रेजुएट युनियन अफ थियोलोजीका गे...
21 Dec, 04:14 AM
फलीफाप हुन्छ,बिहान उठ्ने बित्तिकै यी काम गर्नुहोस
बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानीसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । दिन शुभ हुनका लागि तन्दुरुस्त शरीर चाहिन्छ । 0
12 Dec, 04:12 AM
9 Dec, 03:04 AM
7 Dec, 03:50 AM
उत्तर कोरिया बारे ९ रोचक तथ्य संसारभरी उत्तर कोरियाको बारेमा मानिसहरुलाई अन्य देशको तुलनामा कम जानकारी छ । राष्ट्रपति किम जोंग उनले आफ्नो देशको नागरिकहरु निकै आरामको जीवन व्यतित गर्ने दाबी गर्छन् तर यो देशमा निकै कडा नियम कानून भएकाले वास्तविकता सार्वजनिक हुँदैनन् । एजेन्सीको सहयोगमा...
4 Dec, 10:58 AM
यी खराब बानी पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भनिन्छ नि मानिसहरुले आ आफ्ना खराब बानीहरु त्याग्नु पर्दछ । तर यहाँ केही यस्ता खराब बानीहरु छन् जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । जो व्यक्तिहरु आफ्ना खराब बानी त्याग्न नसकेर बसिरहेका छन् उनीहरुका लागि भने यो शुभ खबरका साथै राम्रो खुराक हुन सक्दछ ।
3 Dec, 03:44 AM
नुहाउँदा भुल्नै नहुने ३ कुरा राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दर शरीरका लागि दिनहुँ नुहाउनु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । जुन ब्यक्तिले दिनहुँ नुहाउँछन् उनीहरुले स्वास्थ्य र अध्यात्मिक हिसावले समेत लाभ प्राप्त गर्ने बताइन्छ । शास्त्रमा सूर्योदय भन्दा ठिक अघि स्नान गर्नु सबै भन्दा राम्रो मानिएको छ ।...
30 Nov, 03:45 AM
बदाम जाडो महिनाको सबैभन्दा लोकप्रिय ‘टाइमपास’ हो । चिसो मौसममा साथीहरुसँग समूहमा बसेर बदाम खानुको मज्जा नै बेग्लै । आजकाल बजारमा चारैतिर बदाम देख्न पाइन्छ । बदामलाई सस्तो काजु र गरिबको ‘एल्मोन्ड’ पनि भनिन्छ । यो स्वादिलो हुनुका साथै यसका थुप्रै लाभ पनि छन...
24 Nov, 03:49 AM
धेरैजसो हामी आफ्नो पर्समा पैसाको साथै केही अन्य कुराहरु पनि राख्ने गर्छौं । तर धेरैपटक पर्समा राखिने यी वस्तुहरु अशुभ मानिन्छ र हाम्रो सौभाग्यलाई पनि दुर्भाग्यमा परिवर्तन गरेर हामीलाई कंगाल बनाइदिन्छ । आज हामी तपाईंलाई पर्समा कहिले पनि राख्न नहुने वस्तुबा...
24 Nov, 03:16 AM
तपाईंको तमाम कोशिशका बाबजुद पनि महिला तपाईंसँग आकर्षित हुन्न । आखिरी किन ? यसका लागि तपाईं आफ्नो लुक्स र स्वच्छताप्रति काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । जान्नुहोस् कसरी तपाईं युवतीलाई आकर्षित गर्न सक्नु हुन्छ । राम्रो देखिनु तपाईंको हातको कुरा हो ,आफूलाई राम्रो दे...
22 Nov, 03:47 AM
कुन बार जन्मेको केटालाई कुन बार जन्मेकी केटी राम्रो ज्योतिष शास्त्रमा अंकको ठूलो महत्व छ । अंक अनुसार नै मान्छेको भविष्यबारे बताउँछन् ज्योतिषहरु । विवाहका लागि अंकमिलान एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्लो समयमा सम्बन्धहरु सहजै विग्न थालेपछि यसको महत्व झनै बढेर गएको छ । जन्मदिनको मुलाङ्क अनुसार कुन केटा केटी...
13 Nov, 03:49 AM
यस्तो बेलामा यौन प्रस्ताव राखे सजिलै स्विकार्छन् महिलाहरुले
एजेन्सी / महिलाहरूलाई महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखी सात दिन भित्र यौन इच्छा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यो अवधिमा महिला यौन आनन्द पनि बढी आउने सो अध्ययनले देखाएको छ ।
12 Nov, 03:12 AM
हातको कोठीले नै बनाइदिन सक्छ तपाईलाई करोडपति
यदि तपाईंको हातको बीचमा स्वतन्त्र रुपमै कोठी छ र त्यो तपाईंले मुठ्ठी पार्दा पूरै ढाकिन्छ भने भने यसको मतलब हुन्छ तपाईं निश्चित रुपमा जीवनमा करोपति बन्नुहुन्छ । तर, कोठीको कुनै रेखामा कुनै ग्रहको पर्खालमा हुनुहुँदैंन । भारतीय ग्रहशास्त्रीहरुले कोठीको उदाह...
12 Nov, 03:09 AM